लूका २४ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
२४ आफूले तयार पारेको सुगन्धित मसला लिएर तिनीहरू हप्ताको पहिलो दिन बिहान सबेरै चिहानतिर गए। २ तर तिनीहरूले चिहानबाट ढुङ्गा गुडाइसकेको पाए ३ र भित्र पसेर हेर्दा तिनीहरूले प्रभु येशूको शव भेट्टाएनन्‌। ४ यसले गर्दा रनभुल्लमा परिरहेको बेला हेर, चम्किलो लुगा लगाएका दुई जना पुरुष तिनीहरूको छेउमा उभिए। ५ डरले गर्दा ती स्त्रीहरूले टाउको उठाउनै सकेनन्‌। उत्तिखेरै ती दुई जना पुरुषले भने: “जीवित व्यक्तिलाई तिमीहरू किन मरेकाहरूको माझ खोजिरहेका छौ? ६ [[उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, किनकि उहाँ ब्यूँतिसक्नुभयो।]]* गालीलमै छँदा उहाँले तिमीहरूलाई के भन्नुभएको थियो सम्झ त। ७ मानिसको छोरा पापीहरूको हातमा सुम्पिइनुपर्छ, खम्बामा टाँगिनुपर्छ र तेस्रो दिनमा ब्यूँतनुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो।” ८ तब उहाँले भन्नुभएको कुरा तिनीहरूले सम्झे ९ अनि तिनीहरू चिहानबाट फर्के र यी सबै कुरा एघार जना चेला र बाँकी अरूलाई खबर गरे। १० ती स्त्रीहरू मरियम मग्दलिनी, योअन्ना र याकूबकी आमा मरियम थिए। तिनीहरूसँगै गएका अरू स्त्रीहरूले पनि यी कुराहरू प्रेषितहरूलाई बताए। ११ तर तिनीहरूलाई यो कुरा वाहियात लाग्यो र ती स्त्रीहरूको कुरा पत्याएनन्‌। १२ [[तर पत्रुस उठे अनि दौडँदै चिहानतिर गए र निहुरिएर भित्र हेर्दा कात्रो मात्र देखे। त्यसैले यो के भएको होला भनेर मनमनै सोच्दै तिनी आफ्नो बाटो लागे।]] १३ तर हेर, त्यही दिन दुई जना चेला यरूशलेमबाट एघार किलोमिटरजति टाढा पर्ने इम्माउस भनिने एउटा गाउँतिर यात्रा गर्दै थिए। १४ अनि जे घटनाहरू भए, त्यसबारे तिनीहरू आपसमा कुरा गर्दै थिए। १५ तिनीहरू आपसमा कुराकानी गरिरहेको बेला येशू स्वयम् तिनीहरूकहाँ आउनुभयो र तिनीहरूसँगै हिंड्न थाल्नुभयो। १६ तर तिनीहरूले उहाँलाई चिन्न सकेनन्‌। १७ उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “तिमीहरू बाटोमा हिंड्दै आपसमा के बहस गर्दैछौ?” अनि अनुहार अँध्यारो बनाएर तिनीहरू ठिङ्ग उभिए। १८ तब तिनीहरूमध्ये क्लेओपा नाम गरेको चेलाले उहाँलाई भने: “के तपाईं अचेल यरूशलेममा के भइरहेको छ, त्यसबारे बेखबर परदेशी हुनुहुन्छ?” १९ अनि उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो: “के कुरा?” तिनीहरूले उहाँलाई भने: “नासरी येशूलाई जे-जे भयो, त्यही कुरा। उहाँ भविष्यवक्ता हुनुहुन्थ्यो, जो परमेश्वर र सारा मानिससामु काम र वचन दुवैमा शक्तिशाली हुनुभयो। २० तर हाम्रा मुख्य पुजारीहरू र यहूदी न्यायपरिषद्का सदस्यहरूले उहाँलाई मृत्युदण्ड दिनको लागि सुम्पे र खम्बामा टाँगे। २१ इस्राएललाई छुटकारा दिने मानिस यही हुनुपर्छ भनेर हामीले आशा गरिरहेका थियौं। अँ साँच्चै, यसबाहेक यी सब कुराहरू भएको पनि आज त तेस्रो दिन भइसक्यो। २२ साथै, हामीमध्येका कोही-कोही स्त्रीहरूले पनि हामीलाई छक्कै पारे, किनकि बिहान सबेरै चिहानमा जाँदा २३ तिनीहरूले उहाँको शव भेट्टाएनछन्‌। साथै, तिनीहरूले स्वर्गदूतहरूको अलौकिक दृश्य देखे अनि ती स्वर्गदूहरूले उहाँ जीवित हुनुहुन्छ भनेर तिनीहरूलाई सुनाए भन्दै तिनीहरू आए। २४ अनि हामीमध्येका कोही-कोही चिहानमा जाँदा तिनीहरूले पनि ती स्त्रीहरूले भनेजस्तै पाए तर उहाँलाई भने देखेनन्‌।” २५ त्यसैले उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “ए अबुझ अनि भविष्यवक्ताहरूले बताएका सबै कुरा नपत्याउने मानिसहरू हो! २६ आफूले पाउनुपर्ने गौरव हासिल गर्न के ख्रीष्टले यी सब कष्ट भोग्नु आवश्यक थिएन र?” २७ अनि मोशा र सारा भविष्यवक्ताको लेखोटदेखि सुरु गरेर सम्पूर्ण धर्मशास्त्रमा भएका आफूसित सम्बन्धित कुराहरूको अर्थ उहाँले तिनीहरूलाई खोलिदिनुभयो। २८ अन्तमा, तिनीहरू जुन गाउँतर्फ यात्रा गरिरहेका थिए, त्यसको नजिकै पुगे। तर उहाँले भने तिनीहरूलाई आफ्नो यात्रा अझै अगाडि बढाउन चाहेजस्तो भान पार्नुभयो। २९ तर तिनीहरूले उहाँलाई यसो भन्दै कर गरे: “हामीसँगै बस्नुहोस् न, किनकि दिन ढलेर साँझ पर्न लागिसक्यो।” अनि उहाँ तिनीहरूसँगै बस्न जानुभयो। ३० तिनीहरूसँगै खान बसिरहेको बेला उहाँले रोटी लिनुभयो, धन्यवाद चढाउनुभयो र भाँचेर तिनीहरूलाई दिन थाल्नुभयो। ३१ त्यतिखेरै तिनीहरूका आँखा खुले र तिनीहरूले उहाँलाई चिने तर उहाँ तिनीहरूलाई छोडेर अलप हुनुभयो। ३२ अनि तिनीहरूले एकअर्कालाई यसो भने: “उहाँले बाटोमा हामीसित कुरा गर्दै धर्मशास्त्रको पूरै अर्थ खोलिदिनुहुँदा के हाम्रो मनमा छटपटी भइरहेको थिएन र?” ३३ तब तिनीहरू तुरुन्तै उठे र यरूशलेम फर्के अनि त्यहाँ एघार जना र अरू चेलाहरूलाई एकसाथ भेला भइरहेको भेट्टाए। ३४ तिनीहरू यसो भन्दै थिए: “यो साँचो हो, प्रभु ब्यूँताइनुभयो र सिमोनकहाँ देखा पर्नुभयो!” ३५ तब बाटोमा भएको घटना अनि रोटी भाँचेर दिनुहुँदा कसरी तिनीहरूले उहाँलाई चिने भनेर तिनीहरूले बताइदिए। ३६ तिनीहरूले यी कुराहरू बताइरहेकै बेला उहाँ स्वयम् तिनीहरू सबैमाझ खडा हुनुभयो [[र तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “तिमीहरूलाई शान्ति होस्।”]] ३७ तर तिनीहरू तर्सिएर आत्तिए अनि आफूले स्वर्गदूत देख्यौं भन्ठाने। ३८ त्यसैले उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “तिमीहरू किन विचलित हुन्छौ अनि तिमीहरू किन मनमा शङ्का गर्छौ? ३९ मेरा हातखुट्टा हेर त, म नै हुँ। मलाई छामेर हेर, किनकि मेरो हाड र मासु छ तर स्वर्गदूतको त हुँदैन।” ४० [[अनि त्यसो भन्दै उहाँले तिनीहरूलाई आफ्नो हातखुट्टा देखाउनुभयो।]] ४१ औधी आनन्द र आश्चर्यले गर्दा तिनीहरूले उहाँको कुरा अझै पत्याएनन्‌। त्यसैले उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “के तिमीहरूसित केही खानेकुरा छ?” ४२ तब तिनीहरूले उहाँलाई एक टुक्रा पोलेको माछा दिए। ४३ उहाँले त्यो लिनुभयो र तिनीहरूकै आँखा अगाडि खानुभयो। ४४ अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “मोशाको व्यवस्था, भविष्यवक्ताहरूको लेखोट र भजनहरूमा मेरो विषयमा लेखिएका सबै कुरा पूरा हुनै पर्छ भनेर म तिमीहरूसित हुँदा मैले तिमीहरूलाई बताएको थिएँ।” ४५ तब धर्मशास्त्रको अर्थ बुझ्न सकून्‌ भनेर उहाँले तिनीहरूको समझ पूरै खोलिदिनुभयो ४६ र उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “यस्तो लेखिएको छ कि ख्रीष्टले दुःख भोग्नेछ र मृत्युबाट तेस्रो दिनमा ब्यूँतनेछ। ४७ अनि उहाँको नाममा पापको क्षमा पाउन पश्‍चात्ताप गर्नुपर्ने सन्देश यरूशलेमबाट सुरु गरेर सबै जातिमा प्रचार गरिनेछ। ४८ अनि तिमीहरू यी कुराहरूको साक्षी हुनेछौ। ४९ हेर, मेरो बुबाले तिमीहरूलाई जे दिन्छु भनी प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, त्यो म पठाउँदैछु। तर स्वर्गबाट शक्ति नपाएसम्म तिमीहरू यही सहरमा बसिरहो।” ५० उहाँले तिनीहरूलाई बेथानीसम्म लैजानुभयो अनि आफ्नो हात उचालेर आशिष्‌ दिनुभयो। ५१ तिनीहरूलाई आशिष्‌ दिंदै गर्दा उहाँ तिनीहरूबाट छुट्टिनुभयो र स्वर्गतिर उचालिन थाल्नुभयो। ५२ तिनीहरूले उहाँलाई दण्डवत्‌ गरे अनि अत्यन्तै रमाउँदै यरूशलेम फर्के। ५३ तिनीहरूले मन्दिरमा परमेश्वरलाई निरन्तर प्रशंसा चढाइरहे।
^ लूका २४:६ * मत्ती १६:३ को फुटनोट हेर्नुहोस्।